Madaxwaynaha Mareykanka, Joe Biden oo si adag u cambaareeyay afgembiga milatari ee ka dhacay dalka Myanmar, | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxwaynaha Mareykanka, Joe Biden oo si adag u cambaareeyay afgembiga milatari ee...
Madaxwaynaha Mareykanka, Joe Biden oo si adag u cambaareeyay afgembiga milatari ee ka dhacay dalka Myanmar,
Madaxwaynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa si adag u cambaareeyay afgembiga milatari ee ka dhacay dalka Myanmar, isaga oo sheegay in kuwa ka masuulka ah lagula xisaabtami doono.
Mr Biden ayaa intaa ku daray in xarigga Aung San Suu Kyi iyo hogaamiyayaasha kale ee rayidka ah ay tahay weerar toos ah oo ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo sareynta sharciga.
Madaxawyne Biden aya baaqay in wadamada caalamka ay ka jawaabaan arrintan waxaa uuna ku hanjabay cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo dalka Myanmar haddii aysan militariga ka noqon tallaabooyiinka ay qaadeen.
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa lagu wadaa inay kulan degdeg ah ka yeeshaan afgembiga ka dhacay dalka Myanmar.
Wariyaha BBC ayaa sheegaya in Aung San Sui Kyi ay xiriir fiican la leedahay Shinaha taasi oo gacan ka geysan karta in wadaxaajood ay la gasho militariga.
Dhanka kale militariga dalka Myanmar ayaa waxay dhidibada u sii aaseen awoodooda xukunka.
Waxaay shaaciyeen in lagu dhawaaqi doono gole wasiiro oo badala wasiiradii dowladdii xukunka laga tuuray.
Waxaa waddooyiinka lagu arkayaa ciidamada militariga oo ammaanka sugaya, waxaana dalkaasi ka dhaqangalay bandow ay militariga soo rogeen.
Previous articleDowladda Itoobiya oo mar kale is hor taagtay gargaarka loo waday gobolka Tigray
Next articleSaraakiil Kenyan ah oo lagu dhaawacay xadka Somaliya iyo Kenya..
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa amray in la dhaqan-geliyo Talooyinka ay soo jeediyeen Guddigii loo xil-saaray xallinta qiima dhaca Shilin Soomaaliga. Qoraal...
Wasiir hore oo ka digay colaad Gobolka Geddo
Ruushka oo qaaday tallaabooyin dheeraad ah oo ay xannuunka coronavirus ...